Kanada oo ka naxsan kooxa jihaadiistayaal Soomaali Kenediyaan ah oo Soomaaliya ku sugan in ay ku laabtaan oo falal argagaxiso ay ka geestaan dalkooda. - iftineducation.com
Kanada oo ka naxsan kooxa jihaadiistayaal Soomaali Kenediyaan ah oo Soomaaliya ku sugan in ay ku laabtaan oo falal argagaxiso ay ka geestaan dalkooda.
aadan21 / January 11, 2013
iftineducation.com – Kanada ayaa waxa ay sheegtay in Soomaaliya ay ku suganyihiin dagaalamayaal Shabaabka ku caawiya dagaalada dowlada Soomaaliya uu kala jiro.
“Waxaan ka baqeynaa in xubnaha Shabaabka ka tirsan ee heesta labada dhalasho in ay xag jirnimadooda kula soo laabtaan Torornto oo ay dhibaato nagaarsiiyaan”, sidaa ayaa lagu yiri hadal si wada jir ah uga soo baxay waaxda Socdaalka iyo ciidamada siroonka ee dalkaasi.
Gudaha dalka Soomaaliya ayaa waxaa lasheegay in ay ku suganyihiin jihaadiistayaal naftooda u hibeeyay ka barbar dagaalamida Shabaab, kuwaas oo kakala yimid dalal ay kamid yihiin Mareykanka, Ingiriiska, iyo Kanada, iyada oo qaarkood qaraxyo ay ka fuliyeen gudaha Soomaaliya halka qaar kamid ah lagu dilay dagaallo Soomaaliya ka dhacay, qaar kalana ay wali kusii dhiiranayaan sii wadida dagaalka ay Shabaabka kula jiraan.
Si kastaba, Keneda ayaa waxa ay kamid noqoneysaa dalalka sida aadka ah uga feejigan in ay dib ugu laabtaan dagaalamayaasha Shabaabka ah ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya.
Qaar Kamid ah Wasaaradaha xukuumada Soomaaliya oo magacyada laga bedelay Qaar kalana Magacyo Lagu Daray!!
Daawo Sawirada Dhismahan Quruxda Badan sida uu Ahaan Jiray Bilo kahor iyo Sida hada uu yahay